Soomaaliya oo ka aamustay cod loo qaadayey buuraha Golan iney Israa'iil leedahay - BBC News Somali
Image caption Buuraha Golan waxay bariga dhex ku leeyihiin ahmiyad siyaasadeed mid militari oo aad muhiim u ah
Gollaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramadda Midoobay ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay in Israaiil lagu cambaareeyo inay xoog ku heysato buuraha Golan ee Suuriya leedahay.
Buurahan ayaa Israa'iil ay ka qabsatay Suuriya intii uu socday dagaalkiii lixda maalin qaatay ee dhacay sanadkii 1967.
Codbixinta ayaa kusoo beegmatay maalin uun kaddib markii madaxweyne Trump uu sheegay in Mareykanku uu aqoonsanayo Israil inay leedahay buuraha Golan.
Haddalka madaxweyne Trump ayaa ka dhigaya dalka Maraykanka waddankii ugu horeeyay ee u aqoonsada Israil inay leedahay dhulkaasi.
Lahaanshaha sawirka Suuriya waxay sheegeysaa iney ku qanceyso oo keli
Image caption AFP/GETTY IMAGES
Gollaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay oo kulan ku yeeshay xarunta Geneva ayaa maalinkii Jimcaha aad uga dooday buuraha Israil ay xoogga ku heysato ee Suuriya.
Xubnaha gollaha oo gaarayay 47 ayaa 26 ka mid ah ay si aqlabiyad ah ugu cambaareeyeen Israil inay xoog ku heysato dhulkaasi.
Safiirka waddanka Bulgari Deyana Kostadinova, oo ku hadlayay magaca Midowga Yurub ayaa sheegay in "Midowga Yurub ay kasoo horjeedaan in Israil ay xoog ku heysato buuraha Golen ee Suuriya, taasi oo uu ku sheegay inay tahay xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga.."
Safiirka Japan Ken Okaniwa, ayaa isn asheegay in buuraha Golan ay tahay " dhul la heysto" iyo "in aan la aqbali kairn in Israil ay sii heysato."
Go'aankaan ayaa diraya "fariin cad oo ku saabsan hufnaanta gollahan" sidoo kalena waxay tani "fariin cad u tahay cida xoogga ku heysato dhulkaasi."
Dalalka u codeeyay in Israil ay xoog ku heysato buuraha Golan ayaa waxaa ka mid ah: Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Slovakia, Spain, Togo, Ukraine iyo UK.
Image caption Khariidadda Buuraha Golan
Shan dal oo kale ayaa ka aamusay kuwaasi oo kala ah : Cameroon, Jamhuuriyada Dimoqaraadiga ee Congo, Fiji, Rwanda and Somalia.
Israa'iil ayaa 1981-kii dhulka ay maamusho ku darsatay buuraha Golan iyada oo ay jirin aqoonsi caalami ah oo ay heshay.
Dagaallada ka dhacay Koonfurta Suuriya oo ay ku barakaceen dad ka badan 270,000 qof
Buuraha Golan intooda badan waxay Israa'iil ku qabsatay dagaalkai bariga dhee ka dhacay 1967-kii, dowladda Suuriyana waxay isku dayday iney buuraheeda dib uga soo ceshato Israa'iil iyada oo 1973-kii dagaal la gashay.
In kabadan 30 deegaan oo ay Yuhuuddu leedahay ayaa ku yaalla buuraha Golan qaybta ay Israa'iil maamusho waxaana ku nool dad lagu qayaaso 20,000.
Deegaannadaasi oo lagu tilmaamo iney sharci darro yihiin marka laga eego dhanka shuruucda caalamiga ah iyada oo ay Israa'iilna ku doodeyso iney sharci yihiin.
Dadka Yuhuudda ee deegaannadaasi degganna waxay deegaan wadagaan dad Suuriyaan ah oo gaaraya 20,000 badankoodna ay yihiin Carabta Duruze loo yaqaanno oo aan meelna uga qixin marki ay buurahaasi Israa'iil qabsatay.